Paşabahçe Ferry nke a na-akọtara bụ Haliled na December | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulPaşabahçe Ferry nke akụkọ ihe mere eme ga-adọrọ gaa Haliç na Disemba
13 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
mbụk pasabahce steamer
Paşabahçe Ferry nke akụkọ ihe mere eme ga-adọrọ gaa Haliç na December; Ka ị na-eche ụbọchị ka ọ bụrụ agụba dị n'ụsọ ụsọ Beykoz, Paşabahçe Ferry akụkọ ihe mere eme, bụ nke e bufere na City Lines site na ebumnuche nke Metrolọ Ọrụ Nkwado Obodo na Istanbul, ga-ebuga na çgbọ mmiri Haliç na Disemba ma a ga-amalite usoro ndozi na ndozi. A ga-eweghachi ụgbọ mmiri ahụ iji ebugharị n'oké osimiri mgbe emechara mweghachi ya.
Paşabahçe Passenger Ferry, otu n'ime ụgbọ mmiri ihe atụ nke akụkọ ihe mere eme Şehir Hatlar X AŞ, nke enyere obodo Beykoz ikike site na 10 afọ gara aga site na nchịkwa obodo Istanbul nke gara aga (IMM), hapụrụ akụkụ mbibi nke osimiri. Mgbe ahụ, a gwara onye na-ahụ maka uzuoku, nke a na-eji sọlfọ agbamakwụkwọ dị obere ka ọ bụrụ ebe ngosi nka. O nwedịrị ike ịmịpụta ihe na Bosphorus na ụzọ maka ndụ mmiri na ndị na-anụ mmiri. Agbanyeghị, ọ nweghị ọrụ ọ bụla emere na ụgbọ mmiri na-adọrọ adọrọ, 10 hapụrụ ka ọ gbaga n'ikpere mmiri Beykoz n'afọ niile.
A zọpụtara ụgbọ mmiri dị afọ 67, nke emere ka ọ dị nro maka ịhapụ mbibi n'ọnwa gara aga, ka a zọpụtara site na ịbụ aguba site na ebumnuche nke IMM. Na arịrịọ nke IMM rịọrọ ụgbọ ahụ na Bosphorus, akachapụrụ ihunanya ahụ. Mgbakọ Mgbakọ Beykoz, ji otu olu kpebie na izu gara aga, "Paşabahçe, dị ka onye njem ụgbọ mmiri na 2 na-ese n'elu n'ime afọ ahụ nyere na ọnọdụ nke ikenye ofBB Mgbakwunye City Lines Inc." ka akwadoro.
Shipgbọ mmiri ahụ, bụ onye hụrụla ihe ndị mere eme kacha mkpa na Istanbul ga-ezute ndị Bosphorus na ndị njem ya ozugbo IMM rụchara ọrụ na nrụzi ha. Ndị ọkachamara İBB nyochara ụgbọ mmiri ahụ, nke leghaara anya; Ọkpụkpụ oxygen na mmiri dị n'oké osimiri na-agbaze mmiri ahụ, a ga-emegharị ntutu ahụ kpamkpam, ọ bụghị n'ọnọdụ iji mee njem na-akwụ ụgwọ chọrọ ego mmezi.
CINEM DEDETAS KWES MERED PRBOCR ME WITHB MER WITH MARA NA EGO
Maazị Sinem Dedetaş, onye isi njikwa Şehir Lines Inc., kwuru na ha malitere atụmatụ ịgbakwunye Paşabahçe Steamboat na ụgbọ mmiri ha site na iwu nke İBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu:
“Na mbu, aga eme ihe banyere nnyocha nyocha (ọnọdụ izugbe) nke Istanbul Harbor Authority. Mgbe anyị mechara nyocha ndị ọrụ aka dị mkpa maka ịdọrọ ụgbọ dị nchebe, anyị ga-ahụ na ọ ga-ebufe ya na çgbọ mmiri Haliç na December. Ọnọdụ nke onye na-ahụ ọkụ ọkụ dị mkpa. Anyị na-ekwu maka ụgbọ mmiri a gbahapụrụ n'ọnọdụ ya ruo ihe dị ka afọ 10. A ga-eme nchịkwa na nyocha banyere njem ụgbọ mmiri na-agagharị. A ga-arụzi ọdọ mmiri n'ọdọ mmiri. Enwere akụkụ a ga-eme ka ọ dị ọhụrụ, dịka ngwu ahu na igwe. Anyị ga-ahụ ihe ọ hapụrụ. A ga-ewepụta akụ na ụba nke ụgbọ a maka ndozigharị na nhazi ọhụụ. A ga-emezi nhazi. Thegbọ mmiri Obodo akara, Paşabahçe, ga-amalite ijere ndị bi na Istanbul akwụkwọ ozi a rụchara ọrụ niile. ”
BOGAZ B THE ihe kacha mma ma dị egwu
Paşabahçe Steamboat nke 67 dị afọ, nke butere mkpọsa maka nlanarị nke ndị Istanbul, abụghị naanị nke kachasị ọsọ ọsọ ”na“ ebe nchekwa ın nke Bosphorus, kamakwa pel nke Bosphorus site n'ụdị okike dị mma.
Fgbọ ahụ mere ihe akụkọ, 1952, wuru dịka ọgụ dị na Taranto, Italy, na 2. na ina si World War II biri, Turkey obodo edoghi na a n'abalị Italy converted n'ime ụdị. Site na injin ya dị ike na nhazi ụgbọ mmiri siri ike, ụgbọ mmiri na-esi Italytali ruo Istanbul na ụbọchị 2,5 na-enwe ike ịgbatị kilomita 18 kwa elekere.
Ngwunye osisi ahụ nwere agba 73,71 mita, obosara nke 13,17 na omimi mita 3,27 jere ozi ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị obodo na akụkụ abụọ nke Bosphorus. N'ime afọ ahụ, 58 rụrụ ọrụ dị ka onye njem n'ime mmiri Istanbul n'okporo ụzọ Adalar na Yalova.
Paşabahçe Passires Ferry, nke enyere Munlọ ọrụ Beykoz nyere site n'aka İBB na 2010, rịọrọ ka e wulite ya ebe ngosi nka. Agbanyeghị, mweghachi na mmezi enweghị ike ịme n'ihi na enweghị ego na ndị nkwado. Ruo ọtụtụ afọ, Beykoz gbachiri ụgbọ mmiri n'ụsọ ihu n'ihu Munọ bụ aka ọrụ.
A na-ewepụ ụgbọala na tram ụzọ na İzmir
prọfesọ Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru amalite njem
Ọdụ ụgbọ elu Ee Mba Emela Mba Emepekwa Ee Mba Ọwara
Turkish Kere World Car First Ferry
Aha nke Caddebostan Ferry Dr. Kpọtụrụ Suat ozugbo
Njem Nostalgia na Pergamon Ferry na Izmir Bay
2 maka ugbo igwe ugbo elu. echere obi
Mara Prozụ ahịa: Haliç - Kemerburgaz Dekovil Line…
Himaç-Kemerburgaz Akwụsịla Egwuregwu okporo ụzọ okporo ụzọ
Modyo TV, onye na-ewu ụlọ nke Horned Haliç Metro Bridge
Haliç-Unkapanı Highway Tunnel Tube Crossing Obi
Nnukwu okporo ụzọ awara awara Haliway-Unkapanı…
Shipyard ụgbọ mmiri
Paşabahçe Passry Ferry
Paşabahçe Ferry Mere eme